भारतसँग सम्मानजनक सम्बन्धको ‘फ्रेमवर्क’ :: अमित ढकाल :: Setopati
प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीले सार्वजनिक समारोह होस् वा अनौपचारिक भेटघाटमा बारम्बार एउटा वाक्य दोहोर्याउने गरेका छन्– कुनै पनि देश ठूलो वा सानो होला, तर त्यो देशको सार्वभौमिकता सानो वा ठूलो हुन्न।
सिद्धान्ततः ओलीले भनेको सही हो। तर, व्यवहारिक सत्य के हो भने सबै मुलुकको आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता प्रयोग तथा रक्षा गर्ने क्षमता समान हुन्न। झन् ठूला मुलुकको छिमेकमा रहेका स–साना मुलुकले त स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने क्षमता कमै राख्छन्। कतिपय त्यस्ता मुलुकले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएका उदाहरण छन्।
धेरै टाढा जानुपर्दैन, हाम्रै क्षेत्रमा रहेका हिमाली राज्यहरूको इतिहास हेरे पुग्छ। बेलायती साम्राज्यको ‘इम्पेरिअल’ चीनसँग इस्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत् टकराव सुरु हुँदा चीन र भारतबीच पाँच हिमाली राज्य थिए– नेपाल, भुटान, कश्मिर, सिक्किम र तिब्बत।
कश्मिर र सिक्किम भारतमा विलय भए, तिब्बत चीनमा। भुटान भारतको छायाँमा छ। नेपाल तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र त छ, तर हामी निरन्तर भारतको दबाबमा छौं।
दबाबपूर्ण सम्बन्धको यो ‘फ्रेमवर्क’ कसरी बदल्ने? हाम्रो चुनौति त्यही हो।
सन् १९५९ मा असफल तिब्बत विद्रोहपछि दलाई लामाले भारतमा शरण लिएदेखि नै चीन र भारतबीचको सीमा विवाद द्विपक्षीय तनावमा बदलिन थालिसकेको थियो। यी दुई मुलुक युद्धमा होमिए नेपालको अस्तित्व के होला भन्ने प्रश्न टड्कारो थियो। नभन्दै सन् १९६२ अक्टोबरमा यी दुई मुलुकबीच सीमायुद्ध सुरु भयो। त्यही महिना चीनका विदेशमन्त्री चेन यी काठमाडौं आए, नेपाल र चीनबीच काठमाडौं–तिब्बत सडक सम्झौताको प्रथम वार्षिकोत्सवको मौका पारेर। उनले काठमाडौंमा दिएको सार्वजनिक भाषणमा भनिदिए, ‘महाराजाधिराज महेन्द्र, श्री ५ को सरकार र नेपाली जनतालाई म के कुरामा आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने नेपाली राष्ट्रमाथि विदेशी आक्रमण भएछ भने चिनियाँ जनता तपाईंहरूका पक्षमा उभिनेछन्।’
हिजोको भारतले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि धावा बोल्न सकेन वा चाहेन भने आजको युगमा समकालीन भारतले त्यस्तो चाहने वा गर्न सक्ने सम्भावना झनै छैन। हामीलाई आफ्नै मनको बाघले धेरै खाएको हो। युवाकालमा स्कुल विभागको प्रशिक्षणबाट दीक्षित कमरेडहरूले पनि सिक्किमीकरणको ‘थ्योरी’ लाई त्यही मनको बाघका कारण आफ्नो सार्वजनिक जीवनको अन्त्यकालसम्म अर्थहीन भट्याइरहेका हुन्।
अहिले हाम्रो चुनौति मुलुकको अस्तित्व कसरी जोगाउने भन्ने होइन। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित र हाम्रा पक्षमा सम्मानपूर्वक बनाउने भन्ने हो। अर्थात्, आपसी सम्मानमा आधारित सम्बन्धको नयाँ ‘फ्रेमवर्क’ कसरी स्थापित गर्ने भन्ने हो।
१) भारतसँगको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्नै सकिन्न, यो सम्बन्ध भारतले जस्तो चाह्यो त्यस्तै रहन्छ भन्ने ‘प्याथोलोजिकल’ आत्मसमर्पणको मनोदशाबाट मुक्त कसरी हुने?
३) तिम्रा जायज स्वार्थको ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टर’ नेपाली राज्य नै हो भनेर भारतलाई कसरी विश्वास दिलाउने?
भारतसँगको सम्बध पुनःपरिभाषित गर्नै सकिन्न भन्ने हाम्रो मानसिकतामा गढेर रहेको ‘प्याथोलोजिकल’ निर्भरता वा आत्मसमर्पण नै असमान नेपाल–भारत सम्बन्धको कारक हो।
मैले यो शृंखलाको भाग–२ लेखिसकेपछि एक प्रबुद्ध व्यक्तिले फोन गरेर भने, ‘अमितजी, तपाईंले लेखेर र हामीले बोलेर केही हुनेवाला छैन। भारतले नेपालसँग जस्तो व्यवहार गर्छ, त्यो कसैगरी परिवर्तन हुँदैन।’
उनले थपे, ‘भारतको नेपालसँग अहिलेजस्तै हेपाहापूर्ण सम्बन्धको पक्षपाति म होइन। तर, मैले यति धेरै देखिसकेँ, यो सम्बन्ध बदलिन्छ भन्ने मलाई आस छैन।’
नेपाली कांग्रेसका कैयन् नेतामा बिपी कोइरालाले यो सम्बन्ध बदल्न सकेनन्, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सकेनन्, राजा–महाराजाले सकेनन् भने हामीले के सकिन्थ्यो भन्ने निराशापूर्ण निष्कर्ष छ। यस्तै निष्कर्षका कारण कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका कतिपय नेता भारतसँग ‘निजी सम्बन्ध’ स्थापित गरेर आफ्नो राजनीति अघि बढाउनेमा छन्। सेना, प्रहरी, प्रशासन लगायत राज्यका कैयन अंगमा त्यस्ता मानिसको कमी छैन।
एक नेताले भने, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध जुन लिकमा चल्छ, त्यहाँबाट ओर्लिन नेपालजस्तो सानो मुलुकसँग तागत हुन्न, इतिहासको कटु सत्य यही हो।’
उनका सारा असफलताका बाबजुद बिपी नेपालीका मनमा यस कारण छन्, उनले प्रजातन्त्र, भारतसँग सम्मानपूर्वक द्विपक्षीय सम्बन्ध र नेपालीको जीवनस्तर उकास्न आफ्नो ऊर्जा र कल्पनाशीलताको उत्साहपूर्ण प्रयोग गरे। बिपी आफ्नो ‘असफल’ राजनीतिक जीवनप्रति खिन्न हुँदै यो लोकबाट विदा भएनन्, आफ्नो प्रयासका लागि सन्तोष गर्दै परलोक गए।
परिणामको भयले पाइला जमाएर बस्नेहरूका लागि मात्र मैले माथिको अंश लेखेको हुँ। जसरी हामीले प्रयत्न नगरेसम्म भारतसँगको असमान सम्बन्ध फेरिन्न भन्नेमा म दृढ छु, त्यसरी नै प्रयास गरेपछि केही न केही त बदलिन्छ भन्नेमा पनि ढुक्क छु। हेपाहा सामन्त छिमेकीका अगाडि हिजोसम्म असहाय ठानिएको लुरे छिमेकीले खुट्टा टेकेर बोल्न थालेपछि सम्बन्धको ‘फ्रेम’ फेरि एउटै रहन कहिल्यै सम्भव हुन्न। कमजोरले बोल्न सुरु गर्नु नै अब सम्बन्धको पुरानो फ्रेम काम लाग्दैन भन्ने पहिलो संकेत हो।
यसका बाबजुद भुटानले भारतको सघन छायाँबाट बाहिर निस्कन प्रयास गरेको छ। भुटानले भारतसँग सन् १९४९ मा गरेको मैत्री सन्धिलाई सन् २००७ मा नयाँ सन्धिले प्रतिस्थापन गर्यो। नयाँ सन्धिमा पहिलेको सन्धिको धारा २ मा रहेको ‘विदेश मामिलामा भारतको सुझाव भुटानलाई मान्य हुने’ प्रावधान हटाइएको छ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको केही महिनापछि थिम्पुमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री थिन्लेले भने, ‘चीन आजको यथार्थ हो, यो यथार्थलाई इन्कार गर्नुभन्दा स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’
भारतीय पत्रकारहरू पनि उपस्थित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा थिन्लेले भने, ‘भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ तर त्यसको मतलब अरू सबैसँग शत्रुता मोल्नुपर्छ भन्ने होइन।’
यसका बाबजुद भुटान केही कदम अघि त बढेको छ। अब संविधान फेरि संशोधन भएर विदेश मामिलामा भारतको सुझाव स्वीकार गर्ने धारा पुनर्स्थापना हुन सम्भव छैन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा तोग्वेको पार्टी सधैं सत्तामा रहेन छैन। अर्को पार्टी कुनै दिन सत्तामा आउनेछ। पूर्व भुटानी प्रधानमन्त्री थिन्लेका शब्दमा जुन रफ्तारमा चीन विश्वव्यापी मञ्चमा ‘यथार्थ’ बनेर उदाउँदैछ, हामी देख्ने छौं भुटान र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएरै छाड्नेछ।
नेपालमा भारतको नाकाबन्दी जारी रहेकै बेला गत अक्टोबर १० मा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज माल्दिभ्स पुगेकी थिइन्। माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिन र सुष्मा स्वराजको भेटपछि यमिनको कार्यालयले दुई नेताबीच भएको संवादबारे विज्ञप्ति निकाल्यो। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘माल्दिभ्सले आफ्नो मुलुकको आन्तरिक विषयमा विदेशी पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्ने छैन। आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ।’
चीनले श्रीलंकाको हम्बानटोटामा बनाउँदै गरेको बन्दरगाहको तेस्रो चरणको काम सकिएपछि चार हजार एकड जमिनमा फैलिएको यो बन्दरगाह दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो हुनेछ। बंगलादेशको चटगाउँमा चीनले बन्दरगाह मात्र बनाएको छैन, त्यहाँबाट म्यान्मार हुँदै चीनसम्म पुग्ने राजमार्ग बनाउँदै छ। यो क्षेत्रको विकासका लागि ८ अर्ब डलर खर्च गर्नुका साथै चीनले बंगलादेशलाई सन् २००८ अघि दिएको सबै ऋण माफ गरिदिएको छ। माल्दिभ्समा पनि चीनको बृहत ‘रोड एन्ड हाउसिङ’ परियोजना छ। त्यसअतिरिक्त गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको माल्दिभ्स भ्रमण बेला हुलहुले टापुमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो धावनमार्ग निर्माण र उक्त विमानस्थल विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यही सम्झौताअनुसार उक्त टापुलाई राजधानी मालेसँग जोड्ने अर्को समुद्रीपुल बनाउने सहमति दुई देशले गरेका छन्।
चीनसँग इन्धन खरिदका लागि बेइजिङ गएको परराष्ट्र, आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमको टोली फर्किंदा ल्हासाबाट सिगात्से हुँदै केरुङको बाटो भएर नेपाल छिर्यो। उक्त टोलीमा संग्लन एक जनाले बाटोको अनुभव मलाई सुनाए, ‘हामी केरुङबाट रसुवा, धुन्चे झर्दै थियौं। बाटो एकदमै साँघुरो थियो। ठाउँ–ठाउँमा गएको पहिरो यसो छेउमा पन्छाइएको थियो, तर पूरै हटाइएको थिएन। हामीमध्ये कसैले भन्यो, ‘यति महत्वपूर्ण सडकको हालत किन यस्तो बनाएको होला?’ गाडीचालकले तुरुन्तै भने, ‘म सानो मान्छे, मलाई हजुरहरूलाई भन्दा धेरै थाहा हुन्न, तर यो सडक राम्रो बनाउने सरकारको योजनै छैन भन्ने हल्ला छ यतातिर।’ सडक विभागका कर्मचारीसँगको भेटमा उनीहरूले हामीलाई भने, ‘माथिबाट आएको आदेशै यस्तै छ, पहिरो आयो भने यसो पन्छाउनू, तर त्योभन्दा धेरै यो सडकमा केही नगर्नू।’
उत्तरसँगको हाम्रो भौगोलिक पहुँच बढ्नेबित्तिकै नेपाली नेता, कर्मचारीतन्त्र र सामान्य नागरिकको आत्मविश्वास उकासिनेछ। उनीहरूको सोच्ने तरिका नै बदलिनेछ। सन् २०२० सम्म चिनिया रेल केरुङ आइपुग्ने छ। एकछिन कल्पना गरौं, २०२५ सम्म हामीले चिनियाँ रेललाई पृथ्वी राजमार्गको गल्छीसम्म ल्याइपुर्यायौं। त्यसले नेपालीको आत्मविश्वासमा कायाकल्प गरिदिने क्षमता राख्नेछ। तत्कालका लागि हामीले गल्छी–केरुङ सडक स्तरोन्नति गरेर सबै मौसममा चल्ने दुई वा चार लेनको चौडा सडक मात्र बनायौं भने पनि त्यसले भारतलाई लिएर हाम्रो मनमा गढेर बसेको ‘प्याथोलोजिकल’ समर्पणको फ्रेमलाई खल्बल्याइदिनेछ।
भारतले बर्सेनि नेपालमा करोडौं रुपैयाँ गोप्य रूपमा खर्च गर्छ। राजनीति र राज्यका छिद्रछिद्रमा ‘आफ्ना’ मानिस भर्ना गर्छ। तैपनि आफ्ना थोरै मात्र स्वार्थ पूरा गराउन सक्छ, अनि धेरै गाली खान्छ। राजनीतिक मैदानमा यति धेरै मानिस लाई ‘आफ्नो’ बनाएको छ, कहिले को रिसाउँछ, कहिले को बटारिन्छ। सबैका स्वार्थ उसले कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैन। न त उसको स्वार्थ नै उनीहरूले सधैँ पूरा गर्न सक्छन्। अन्तमा नेपालमा उसको हात लाग्ने भारतविरोधी भावना मात्र हो। यति हुँदाहुँदै, यो ‘सेल्फ डिफिटिङ’ चलखेलमा भारत वर्षौंदेखि अभिशप्त छ।
भन्न जरूरी छ, नेपाल राज्य नै तिम्रा जायज चासोको ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टर’ हो।
त्यसैले, राज्यका छिद्रछिद्रमा, व्यक्तिव्यक्तिमा लगानी नगर। नेपालमा घटनाहरूलाई, पार्टीहरूलाई, राज्यका यन्त्रहरूलाई ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्ने प्रयत्न नगर। लोकतन्त्रका सवालमा शुभेच्छा देऊ तर संग्लन नहोऊ। आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर।
जो जो जहाँ जहाँ छ, त्यहीँबाट भन्ने। लेख्न सक्नेले लेखेर भन्ने। बोल्न सक्नेले बोलेर भन्ने। भेट हुनेले भेटेर भन्ने। नेताहरूले भारतलाई भन्ने, हामीले नेपालका नेतालाई भन्ने। हिजोसम्मका ‘सेवक’ हरू सबैले भारतलाई भन्न नसक्लान् तर पार्टीभित्रका भन्न सक्नेले भन्ने। सबैले भनेर, लेखेर, बोलेर आन्तरिक रूपमा एउटा नयाँ सामाजिक–राजनीतिक चेतना निर्माण गर्ने हो, जहाँ भारतसँग अहिलेको जस्तो असमानपूर्ण सम्बन्ध राख्न सम्भव नरहोस्।
भारतसँग नयाँ सम्बन्धको ‘फ्रेमवर्क’ निर्माण गर्न यसपालि राम्रो अवसर छ। भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीसँगै हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, यहाँबाट यसले कोल्टे फेर्ने र बढी सम्मानजनक हुनुको विकल्प छैन।
प्रकाशित मिति: 2015-12-22 11:22:31